IMacX DVD Ripper Pro, fumana eyona DVD yokukrazula simahla | IPhone iindaba
IMacX DVD Ripper Pro, fumana eyona nkqubo ikrazulayo yeDVD yasimahla
Kwiminyaka elishumi eyadlulayo, ukubona phantse nayiphi na ividiyo kwigumbi lethu lokuhlala kwafuneka siyitshise kwiCD okanye kwiDVD ukuze siyibeke kwisidlali sedesktop. Kungekudala emva koko, iikhompyuter ezinamazibuko e-USB zaqala ukubonakala ezisivumela ukuba sidibanise i-pendrive kwaye sibukele iividiyo zethu ngqo ngaphandle kokusebenzisa iDVD. Iye yanetha kakhulu ukusukela ngoko, kodwa inye into engatshintshanga: ukuba sifuna ukukhupha idatha kwii-DVD zethu zoqobo kufuneka sisebenzise inkqubo efana nale IMacX DVD Ripper Pro, lolona khetho lufanelekileyo lweMacOS.
IMacX DVD Ripper Pro yifayile ye- Eyona nkqubo ilungileyo yokukrazula iiDVD zethu zakuqala kwiMac kodwa, njengayo nayiphi na isoftware esemgangathweni, ine-mole encinci Yenza ixabiso le- € 59.95. Into elungileyo kukuba singena kwimihla ebalulekileyo apho sonke sithanda ukwabelana ngezinto nabantu esibathandayo, kwaye leyo yinto eyenziwa ngabaphuhlisi beDVD yeMacX ngokusinika ithuba lokuba Fumana ikopi ezili-1000 zasimahla ngemini yesoftware efanelekileyo yeDVD kude kube nguJanuwari 5, 2017. Umahluko kuphela phakathi kwezi kopi kunye neekopi ezihlawulwayo yile asiyi kuba nakho ukuzihlaziya.
1 Kutheni ndifuna inkqubo efana neMacX DVD Ripper Pro?
2 IMacX DVD Ripper Pro isivumela ukuba sibukele iiDVD zethu nakwesiphi na isixhobo
3 Kwaye kutheni ukukrazula iiDVD kubaluleke kangaka?
4 Iimpawu ezifumaneka kwiMacX DVD Ripper Pro
5 Isebenza njani iMacX DVD Ripper Pro
6 Uyifumana kanjani iMacX DVD Ripper Pro kunye neMacX MediaTrans yasimahla
Kutheni ndifuna inkqubo efana neMacX DVD Ripper Pro?
Isizathu sokuqala esiza engqondweni sesona sinengqiqo: yenza ikopi yogcino lweeDVD zethu. Uchane kangakanani xa ucinga ukuba iDVD yeyobomi. Ukukungqina oku, ndiza kushwankathela into eyenzeke kum kwiminyaka elishumi eyadlulayo: kwiminyaka engaphambi kokuba ndibe ngumlandeli wabahleli beaudio aziwa njenge "Trackers." Ndenze iingoma ezili-14 ezathi, nangona kuyinyani ukuba zazingalunganga kwaphela, bendihlala ndifuna ukugcina. Ndizitshisile ezo ngoma kwiCD, efana neDVD, kwaye le CD yandicofa (ibhaktiriya? Baye bandixelela), ukuze xa i-laser idlula kwezinye iindawo, isandi sikhuphe uhlobo olucaphukisayo okanye kwavakala ngathi yipoppy. Into yokuqala endiyenzileyo xa ndinekhompyuter yam yokuqala kukuzama ukubuyisa i-CD ebethiweyo. Ndenzile, kodwa ngokuyinxalenye: iingoma ezili-12 zifunyenwe kwaye uninzi lwazo zinomgangatho ombi. Ukuba bendenze ikopi yogcino lwale CD, isandi ngesele sigqibelele ukuza kuthi ga ngoku kwiminyaka engama-20 emva kokuyilwa kwayo nokunye okuninzi.
Into enomdla kukuba, omnye wemisebenzi ebonelelwa yiMacX DVD Ripper Pro kukuba ukulungisa iiDVD. Ukuba khange sibaphathe kakuhle kule minyaka idlulileyo, kunokwenzeka ukuba iiDVD ziyakrwitshwa, nto leyo eya kuthi ibangele umphumo ofanayo nalowo ndihlupheke ngawo kwi-CD yam yomculo kodwa nakwividiyo. Lo msebenzi uza kuzama ukufaka i-DVD ekhompyutheni ukuze ilungiswe kwaye igcine ividiyo kuyo ikhangeleka ilungile kwiminyaka ezayo.
Esinye isizathu sokusebenzisa iMacX DVD Ripper Pro kukuba ugcine indawo. Awungekhe undikholelwe, kodwa iminyaka ndigcine kuphela iCD / iDVD yeqela lomculo; Ndikhuphe konke okuseleyo. Ndisakhumbula xa ndandineediski zomculo ezininzi kunye neeDVD ezazithe saa kwigumbi lam nakwinxalenye yendlu yam. Eyona nto imbi ngayo yonke le nto, ngokoluvo lwam, ayisosithuba esihlala kwiDVD, kodwa kufuneka sibajonge ukuze bakwazi ukonwabela. Ukuba sizikrazule kwi-hard drive, jonga kwifolda yevidiyo yakho okanye wenze uphando kwi-Finder ukuze uzifumane. Ukuba sinazo kwifomathi ebonakalayo, siqala phi ukujonga? Andixoki kuwe xa ndisithi ndinomntakwethu onamakhulu ala "discs" kwaye uphambene ukufumana ezinye iimuvi, nangona ndivuma ukuba oku kuyenzeka xa ekhangela iimuvi ezirekhodwe kwiDVD kunye nezinye Kaninzi.
IMacX DVD Ripper Pro isivumela ukuba sibukele iiDVD zethu nakwesiphi na isixhobo
Andibhaqi umpu xa ndisithi ukudlala iDVD kufuneka ube nomdlali weDVD. Andazi eyakho, kodwa i-iPhone yam ayinasithuba sokufaka iDVD kuyo. Into enayo yi-128GB yendawo apho ndingabeka khona iimovie ezininzi. IMacX DVD Ripper Pro iyakusivumelaUkukhupha ividiyo kuyo nayiphi na intsusa okanye kwiDVD yakho kwaye uyithumele kwezinye iifomathi, phakathi kwayo yi-MP4 enokudlalwa nayiphi na i-iPhone.
Zininzi iimeko apho isoftware enje iyimfuneko, njengokungathengi into esele siyithengile kwi-iTunes ukuba sele sinayo kwi-DVD yoqobo, ishenxisa izithintelo zengingqi okanye, ubuncinci, sikwazi hlela iividiyo ukuze wabelane ngayo nayiphi na indlela.
Kwaye kutheni ukukrazula iiDVD kubaluleke kangaka?
Ewe ndingacinga ngezizathu ezibini ngaphandle kokucinga kakhulu:
Umgangatho. Singakhangela naluphi na olunye ukhetho, kodwa asizukulufumana. Ngapha koko, nayiphi na ividiyo esiyifumana kwi-Intanethi ikhutshiwe ngaphambili. Ukuba sifuna umgangatho, eyona nto sinokuyenza kukukrazula iDVD.
Sigcina onke amamenyu kunye nomxholo. Ngokwenyani nayiphi na imovie ekhutshelweyo, into esele siyazi ukuba ayikho mthethweni, ihlala ikhutshelwa kwi-hard drive yethu ene-1-2 yeengoma zomsindo kunye nenye ividiyo (2 ividiyo ukuba yi-3D), kodwa ezinye iintlobo zomxholo ezinjengeemenyu azongezwa. eya kusivumela ukuba sikhethe isahluko esithile okanye imixholo engezantsi kunye neelwimi ezahlukeneyo. Ngamafutshane, ukuba siyifuna yonke, kungcono ukukrazula iDVD.
Iimpawu ezifumaneka kwiMacX DVD Ripper Pro
Rip DVDs to the most used video and audio formats.
Iyakwazi ukususa ezona zithintelo zokulwa nokukrazula.
Guqula iDVD ibe yifomathi, kubandakanya iiprofayili ze-iPhone, i-Android, njl.
Guqula iDVD kwi-ISO egcina umgangatho kunye nazo zonke iimenyu zentsusa.
Ukubakho kokuhlela iividiyo, ukukhupha iaudio okanye ukuthatha iifoto zesikrini.
Isantya esikhulu sokubhala ngelixa ugcina owona mgangatho uphezulu.
Isebenza njani iMacX DVD Ripper Pro
Kulungile. Le nkqubo intle ayisiyonto ilungileyo inako ukuyenza. Zininzi iinkqubo esivumela ukuba sikroboze iiDVD zethu ngomgangatho ophezulu, kodwa ayizizo zonke ezinomdla njengenkqubo ephambili yale posi. Ukuguqula ngaphandle kwengxaki, siya kulandela la manyathelo sele ebonisiwe kwiscreen senkqubo:
Cofa kwi logo yeDVD.
Sikhetha indlela apho ividiyo ekrazukileyo iya kugcinwa kunye nefomathi esifuna ukuyigcina ngayo.
Cofa RUN kwaye ulinde uguquko ukugqiba.
Njengoko ubona kwisikrini sangaphambili, iMacX DVD Ripper Pro nayo isivumela ukuba silawule iividiyo ngolwandiso lwe-ISO. Iifayile ezinokongezwa kwe-ISO yimifanekiso yeCD kwaye zibizwa njalo kuba zibonisa ngokuchanekileyo into ekwiCD okanye iDVD. Umzekelo, xa sikhuphela inkqubo yokusebenza yasimahla enje ngo-Ubuntu (wonke umntu ocinga imeko abayithandayo), into esiya kuyikhuphela iya kuba ngumfanekiso we-ISO esinokuthi siyitshise kwi-DVD, nangona kunokuba ngcono ukuyilawula nge Inkqubo esivumela ukuba senze ufakelo kwi-USB drive, njenge-UNetbootin.
Olu khetho lufezekile ukuba sikhe sayigcina ividiyo ngokwandiswa kwe-ISO kwixa elidlulileyo okanye umntu esimaziyo osinika imovie kwifomathi ye-ISO kwaye sifuna ukuyiguqulela kwifomathi enokudlalwa nakweyiphi na ikhompyuter. Ikwasivumela ukuba senze indlela enye, oko kukuthi, thatha iDVD yoqobo kwaye uyigcine njengomfanekiso we-ISO. Nje ukuba yenziwe, sinokuphinda sivelise ukuba i-ISO ivela kwi-Mac ngokwayo kunye nawuphi na umdlali ohambelanayo (azikho ninzi), nangona kusengqiqweni ukucinga ukuba sigcina umfanekiso we-CD njengogcino. Nokuba siyintoni na isizathu sokufuna ukwenza okanye ukudibanisa i-ISO, iMacX DVD Ripper Pro iya kuba nakho ukuyiphatha, okoko nje kungaphakathi komfanekiso weCD yifayile equlathe umxholo wevidiyo.
Inkqubo ibonelela ngeendlela ezininzi ngakumbi kunalezo zichaziweyo okwangoku kwaye yiyo loo nto ithathwa njengenye yeenkqubo ezilungileyo yakrazula iDVD kwiMac, kodwa kuya kufuneka sipapashe isithuba esibanzi ngakumbi ukuze sikwazi ukuzigubungela zonke.
Uyifumana kanjani iMacX DVD Ripper Pro kunye neMacX MediaTrans yasimahla
Makhe siye kwi iwebhusayithi yokwazisa. Ukusuka apho ungathatha inxaxheba ukufumana ikopi yakho yeMacX DVD Ripper Pro okanye iMacX Imithombo yeendabaInkqubo onokuhambisa ngayo iifayile zemultimedia phakathi kwezixhobo ze-iOS kunye neMac.
Sifaka i-imeyile kwibhokisi yencoko. Kufanelekile ukubeka i-imeyile yokwenyani ukuze basithumelele isitshixo selayisensi, nangona eso sitshixo size kum ngqo kwi .zip endikhuphelileyo.
Sinqakraza ku "Fumana iKhowudi yeLayisensi".
Emva koko, nqakraza kwi «Nika uguqulelo».
Sikhuphela ifayile oza kusinika yona.
Unzip ifayile ekhutshelwe kwisinyathelo esedlule.
Inyathelo elilandelayo kukufaka ifayile kwi-DMG.
Okulandelayo, sivula iMacX DVD Ripper Pro.Iya kuba kwinguqulelo yesilingo.
Okokugqibela, senza ukuba le nkqubo isebenze kusetyenziswa isitshixo selayisensi abaye bayifaka kwi .zip esiyikhupheleyo kwinyathelo lesi-5. UKUHLAZIYWA: igama lokugqithisa lize kum kwi .zip, kodwa abanye abasebenzisi bathi kufuneka lifike ngeposi.
Bendingafuni ukuvalelisa ngaphandle kokukukhumbuza ukuba kude kube ngumhla woku-1 ungafumana ikopi zeMacX DVD Ripper Pro simahla. Kwaye ukuba awuqinisekanga kukhubazeko lokungakwazi ukufaka uhlaziyo lwamva, unako Thatha ithuba lesibonelelo esikhoyo ngoku kunye nohlaziyo lobomi nge-X 19.95 kuphela, ayisiyonto ingaphantsi konga i-30. Ngaphandle kwamathandabuzo, sisibonelelo esihle kuye nawuphi na umsebenzisi ofuna ukuthatha ithuba lazo zonke izibonelelo zale nkqubo inkulu ngayo yonke into enokuyenza ngoku nakwixesha elizayo. Ngaba ungomnye wabo?
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » IMacX DVD Ripper Pro, fumana eyona nkqubo ikrazulayo yeDVD yasimahla
Khuphela ingxelo yolingo njengoko ubonisile, kodwa kwiDMG andifumani fayile yecala.
Ikhowudi yelayisensi ithunyelwa nge-imeyile.
I-Apple iyeka ukusayina i-iOS 10.1.1
I-8x15 Podcast: Ukuvavanya ii-AirPods eziBukhoma